मासु नै नपाउने सहरमा कुकुर के खाएर मोटाओस् त ?
इन वाटरकलर इन्टरनेसनल फेस्टिभलमा सहभागिता जनाउन हामी १७ कलाकारको टोली भारत राजस्थानस्थित कोटा पुगेका थियौँ । कोटा विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा भाग लिन १७ देशबाट डेढ सयभन्दा बढी कलाकार आएका रहेछन् ।
हामीलाई बस्ने व्यवस्था गरेको होटल शुद्ध शाकाहारी परेछ । हाम्रो टोली थियो, मासु नभई भात नरुच्ने । त्यसैले होटलभन्दा टाढा–टाढा घुम्न निस्कियौँ । उद्देश्य घुम्नु मात्र थिएन, मासुभात पाइने रेस्टुराँ खोज्नु थियो । सहर घुम्दै गर्दा बाटोमा थुप्रै कुकुर देख्यौँ । तर जति कुकुर देख्यौँ, ती सबै अति नै ख्याउटे थिए । कुनै कुनैको त बाहिरबाटै करङ गन्न सकिने ।
लामो घुमाइपछि पो थाहा भयो, पूरा सहरै लगभग शाकाहारी रहेछ । मासु त के, अन्डासम्म पनि नपाइने । हाम्रो केही जोर लागेन । अन्तमा फर्किएर शाकाहारी थालीले नै भोक मेटायौँ । मेरो पेट त भरियो । आँखामा भने बाटोमा देखिएका ख्याउटे कुकुरको विम्ब नाचिरह्यो । किन ख्याउटे छन् त ती कुकुर ? सँगै रहेका साथीलाई प्रश्न राखेँ । उनको जवाफ पाएपछि म झसंगै भएँ । उनको जवाफ थियो, मासु नै नपाउने सहरमा कुकुर के खाएर मोटाओस् त ?
कार्यशालाको अर्को चरणमा कोटादेखि डेढ घन्टे दूरीमा पर्ने बुन्दीस्थित तारागढ किल्ला छेउमा कलाकारले आफ्ना कौशल देखाए । त्यहाँको काम समापन गरेर ऐतिहासिक दरबार र किल्ला अवलोकनका लागि गयौँ । किल्लाका एक कर्मचारी गाइड बनेर हाम्रो अवलोकन भ्रमणलाई सहज पारिदिए ।
ती गाइडले सात सय वर्षपहिलेको राजाले प्रयोग गर्ने शौचालय, सुनले सिंगारिएका चित्रले सजिसजाउ महारानीको शयनकक्ष देखाए । तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंहको एक मात्र फोटो भनेर श्यामश्वेत तस्बिर देखाए । हामी ‘ओहो !’ भन्दै निस्कियौँ । तर त्यो कुनै हातेचित्र नभई क्यामेराले खिचेको फोटो थियो । क्यामेरा आविष्कारको इतिहास खोतल्दा मनमा शंका लाग्ने भइहाल्यो । गुगल गरी हेर्दा दरबार र किल्ला निर्माण सात सय वर्षपहिले भएको थियो भने उनले देखाएको चित्र महाराजा रघुवीर सिंहको (१८६९–१९२७) । गाइड भइटोपलेका ती कर्मचारीले तथ्यहीन कुरा गरेर उल्लु पो बनाएछन् ।
दारु खाने आइप्याड
हाम्रो टोलीमा एक साथीले आइप्याड साथमै ल्याएका थिए । सोच्दै थिएँ, पत्रिकाका लागि चित्र बनाउनुपर्ने भए यो काम लाग्न सक्छ । कोटा चिसो थियो । घरदेखि टाढा आएको मौकामा मौसमले च्यालेन्ज गर्‍यो भन्दै एउटा समूहले मदिरा चाख्ने योजना बनायो । तर मदिरा चाख्न कानुन बाधक भइदियो । जसोतसो आइप्याडवाला साथीले एक बोतल व्यवस्था गरे ।
भोलिपल्ट मैले आइप्याड चलाउन मागेँ । निराश मुद्रामा उनले भने, “आइप्याड त दारु खाएर बेहोस छ ।” हिजो ल्याएको बोतल झोलामै चुहिएपछि मदिराले आइप्याडमा क्षति पुगेको रहेछ । “दारु मात्र पिलाउने ? आइप्याडलाई सितन पनि दिएको भए पो बेहोस हुँदैनथ्यो ।” मेरो टिप्पणीपछि वातावरण हाँसोमय भयो ।
सहयोगी पुरन, हेपाहा होटलवाला
कोटाबाट जयपुरसम्मको बस र होटल अनलाइन बुक गरिदिएर पाल्पाका पुरन थापाले हाम्रो टोलीलाई सहयोग गरे र आफू भने अन्तै घुम्न निस्के । तर बुक गरिएको होटल त्रिलोक प्यालेसले विदेशीका लागि होइन भन्दै हामीलाई कोठा दिन मानेन । अनलाइन बुकिङका सर्त राम्ररी हेरिएनछ, सायद । तिरिएको शुल्क फिर्ता पाउने सम्भावना कम थियो । होटलवालाले नेपाली मतदाता परिचयपत्र भए कुरा मिल्न सक्छ भने । त्यसको कारण सोध्दा उनले भने, “यसले तपाईंहरु नेपाली भन्ने प्रमाणित हुन्छ । नेपाल भारतको एक स्वतन्त्र प्रान्तमध्ये एक हो नि त !”
उनका यस्ता हेपाहा शब्दका कारण हाम्रो पारो तातिहाल्यो । साथी केशवराज खनालले तिनलाई भारतमाथि अंग्रेजको शासन अवधि र नेपालको सार्वभौमसत्ता विषयमा लामो पाठ पढाउन भ्याए । होटलवाला रातोनीलो भए र अनौठा सर्त तेर्स्‍याउँदै हामीलाई बास दिन तयार भए । हामीले अस्वीकार गरेपछि अर्को होटलको व्यवस्था गरिदिन्छु भने । त्यो पैसा तिमी नै खाऊ, तिमीले भनेको होटलमा त जाँदै जान्नौँ भनेर निस्कियौँ ।
दुई रातको जयपुर बसाइपछि अर्को गन्तव्य थियो, दिल्ली । दिल्लीबाट फर्कने क्रममा होटलमा पुरन देखापरे । एक्लै बुन्दी घुम्न निस्केका उनी होटलवालाको दुर्व्‍यवहार थाहा पाएर दिल्ली आएका थिए । उनले होटल बुक गर्दा माया मारिसकेको पैसा हाम्रो हातमा थमाए र भने, “होटलले शुल्क फिर्ता गर्छ, त्यो मेरो खातामा आउँछ ।” सर्तअनुसार त पैसा फिर्ता नपाइने नै थियो । त्यसैले पुरनले ढाँटेरै हाम्रो पैसा फिर्ता गरेजस्तो लाग्यो ।